AmaPedi - South Africa
I-Pedi yayisetshenziswe ngaphambilini ukuchaza izikhulumi zesiSuthu zaseMpumalanga nesiFundazwe saseNyakatho eNingizimu Afrika. Muva nje, lawa maqembu ashiwo kabusha isi-Northern Sotho.
I-Pedi, njengoba iqondwa kakhulu, iyingxenye ye-Highveld Sotho ehlala epulazini eliseduze nePietersburg. Ezinye izinkampani ezingaphansi kweNorthern Sotho, iningi labo iPedi eliye labhekana nalo, yi-Southern Lowdd Sotho kanye nangaphansi kwe-Escarpment yaseDrakensberg, ne-Eastern Sotho esifundeni saseMapulaneng, ngaseLydenburg.
Ngokulandela ukunqotshwa kwabo ezandleni zabaseBrithani, amaPedi adluliselwa emayelana nezinqolobane ezikhethwe ngokusemthethweni. Okubaluleke kunazo zonke kwakuyi-Pedi heartland, iSekhukhuneland....more
Isiko sePedi sasihlukanisa kakhulu phakathi kobulili kuwo wonke amazinga. Lokhu kwathinta zonke izigaba zempilo yabo, kusukela emaceleni ukubopha izingubo zabo namadoda asebentisa ama-reef-knots kanye nabesifazane abakhulu-amaqhinga-ukuqala...more
Ekuphakameni kwamandla abo uPedi noma uMaroteng, ngaphansi kobuholi bukaThulare (cishe ngo-1790-1820), baqala ukuhlasela ngokuphindaphindiwe kwabantu abazungezile....more
Njengabanye abantu abakhuluma isiBantu, umshado wePedi (lenyalo) awugcini nje ngokusemthethweni ubuhlobo phakathi kwabantu ngabanye: kungukukhathazeka kweqembu, ukubhalisa ubuhlobo phakathi kwemindeni....more
Imisebenzi yobuciko e-Pedi ihlanganisa ubumba, umdwebo wendlu, ukukhiqiza izinkuni (ikakhulukazi okwenza izigubhu), i-metalsmithing kanye ne-beadwork....more
NjengesiSotho nesiSwana, iPedi, ngezikhathi zangaphambi kokunqotshwa, yayihlala emadolobheni amakhulu ahlukaniswe ngamaqembu e-kgoro agxile emaceleni emindeni ethanda umzila wabantwana....more
Inhlangano Yezombangazwe yamaPedi
AmaPedi abe isigxile phezu kwendawo eningi ehambisana neRimpopo, iVaal kanye neKomati, amandla abo okukhulunywa ngawo njengamanje okuthiwa yiSekhukhuneland, enhliziyweni yawo phakathi kwemifula ye-Olifants ne-Steelpoort....more
Ngosuku lapho iseshini sokuqalwa kwamadoda e-Pedi bogwera iphelile, i-yale (ukuqala kwamantombazane) yaqala. Amantombazane kuphela ayesebenzela umkhosi wokukhulelwa ayengakwazi ukuqaliswa....more
Isikhathi sokuqala, esasiyi (futhi sihlala ngaso sonke isikhathi), sasixhomeke ekufikeni kwendodana ephezulu noma umzukulu wezinduna phakathi kwabaqalayo. WayenguMholi we-initiation lodge kanye nomholi wophiko lwalolo gesi noma isethi yobudala (inzalo)...more
AmaPedi aseNingizimu Afrika
Ngokwesiko somlomo, i-Pedi ingahle ibuyele emuva eMaroteng, i-offshoot yaseKgatla, namuhla isakhiwo esibalulekile se-Tswana....more